Nyochaa Capture G5 HD, Gigatel mbụ smartphone | Gam akporosis
Alexander German | | Nyocha
A na - agba ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị Spen ume ị rụpụta ngwaọrụ mkpanaka, obi abụọ adịghị ya bụ ndị ama ama, nke kachasị ewu ewu ugbu a ga - abụ bq, mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-amalite ma ọ bụ na ha enweworị njem n'ụwa a.
Taa, anyị na-ewetara gị nyochaa nke ngwaọrụ mkpanaka mbụ nke Spanish TvTech, ụlọ ọrụ nwere 100% isi obodo Spanish nke na-abanye ụwa nke ekwentị mkpanaka n'okpuru akara Gigatel, yana ọnụahịa ahụ anyị ewetara Capture G5 HD.
Anyị nwere ọnụnọ anyị n'ihu anyị nwere ike ịbanye n'ime etitiN'ihe banyere nkọwa ha, ha yiri nke ngwaọrụ ndị ọzọ na-agafe n'otu ụdị, anyị ga-ekwu maka ha n'okpuru.
Obi gi bu quad isi processor Site na ọsọ elekere nke 1.3 GHz, tinyere 1 GB nke RAM, n'ọhịa nchekwa, ọ nwere ikike 8 GB mana enwere ike ịgbasa ya site na microSD kaadị ruo 32 GB.
Ọ nwere ihuenyo 5-anụ ọhịa IPS HD, yana mkpebi nke 1280 × 720 pikselụ, n'oge m nwara ya ọ hapụrụ m ezigbo uto, àgwà agba dị ezigbo mma, Ebe sistemụ arụmọrụ anyị nwere bụ gam akporo 4.4.2 KitKat.
Banyere igwefoto ọ na-ebu, anyị nwere Igwefoto n'ihu 2MP na igwefoto azụ 13MP, ogo nke foto dị ezigbo mma maka etiti, mana ọ ga-edo anya na anyị enweghị ike ịme ka anyị nwere ogo foto dị oke elu ma ọ bụrụ na anyị agagharị na ngalaba nke ngwaọrụ a.
Banyere batrị, o nwere batrị 2000 mAh, nke nyere m ezigbo echiche, ọnọdụ ụra ya bụ ezigbo ezigboDịka m kwuru na vidiyo ahụ, hapụ ekwentị ahụ na batrị 70-65% yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị 11 ọ nwere 43%, ihe dị ezigbo mma, ekwentị nwere ngwa nke aka ya nke na - enyere gị aka ịkwalite batrị gị, na - agwa gị ngwa ahụ. ha na-eri ma ego ole ọ pụtara ịwepụ ha.
Ọ bụrụ na ị na-enye ya ihe kwesịrị ekwesị, ya bụ, ị naghị egwu egwu ụbọchị niile, ma ọ bụ jiri ngwa nwere nnukwu oriri, mana ị na-eji ya aza WhatsApp, gụọ ozi ma chọgharịa, ekwentị nwere ike ijikwa ụbọchị ahụ na enweghị nsogbu, M jisiri ike na-atachi obi ogologo ụbọchị abụọ na-enye ya a ejidere ojiji, m na-eche n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na njikarịcha nke na-abaghị uru ala.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nhazi ngwaọrụ na ogo ya, mkpuchi azụ nke na-abịa nke ọma bụ acha anụnụ anụnụ hụrụ na mmadụ dị mma, site na mmetụ obi ụtọ, ngwaọrụ nwere ibu nke gram 140 na ọkpụrụkpụ nke 8.5 millimeters, anyị na-alaghachi na ndị ahụ ekwuru, na-echebara oke na ọnụahịa anyị na-agagharị na mpaghara a nwere ezigbo ngwụcha.
Iji mechaa nyocha a nke Capture G5 HD, anyị nwere ike ikwu maka njikọta, ọ bụ Dual Sim ekwentị, yana ikike 3G, 802.11 WiFi na Bluetooth, ọnụahịa nke ị nwere ike ịzụta ekwentị bụ euro 169.90 nke bụ a pụtara gbanwee price na nke ndị ọzọ nke asọmpi na-akpali.
Enterbanye ụwa nke telephony adịghị mfe, tụlee nke ahụ a ngwaọrụ nwere mpi na Motorola si Moto G, ekwentị nke gbasara ikike, mma, mmelite na ọnụahịa, site n'echiche m kacha mma na ahịa, dịka ị nwere ike ịhụ na vidiyo vidiyo nke AnTuTu nke Capture G5 HD bụ 18373, ihe dịtụ elu karịa Moto G, ma ọ bụghị ọdịiche dị ịrịba ama.
Mmechi, maka ụbọchị taa ekwentị karịrị oke, isi ihe dị mma ga-abụ nkwenye nke ọbịbịa nke gam akporo 5 Lollipop na njedebe, batrị ahụ nwere ezigbo ntachi obi ma na-eguzogide iji kwa ụbọchị eme ihe nke ọma, ka oge na-aga anyị ga-ahụ otu Gigatel si eme njem ọhụrụ a, site ebe a ka anyị chọrọ dịrị gị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyochaa Capture G5 HD, Gigatel mbụ ama
Ebibi mutant na-akwụsịghị na Food Battle: Egwuregwu ahụ